International standards — နိုင်ငံတကာစံနှုန်းများ – Free Expression Myanmar
International standards are the best practices used by different countries worldwide. They come fromanumber of places.
International standards originate from “hard” law:
And soft law:
UNESCO also sponsors declarations and other international standard setting documents on freedom of expression
Asia: ASEAN Human Rights Declaration, ASEAN Intergovernmental Commission on Human Rights
+ Europe, Africa, Americas
မလုပ်မဖြစ်လုပ်ဆောင်ရန်တာဝန်ရှိသော ဥပဒေမှ ဆင်းသက်လာသည့် နိူင်််ငံတကာစံနှုန်းများ
နိုင်ငံသားနှင့် နိုင်ငံရေးအခွင့်အရေးဆိုင်ရာ နိုင်ငံတကာ သဘောတူညီမှုစာချုပ်
လွတ်လပ်စွာရေးသားထုတ်ဖော်ပြောဆိုခြင်းနှင့် လွတ်လပ်သောအမြင်သဘောထားဆိုင်ရာအခွင့်အရေးကို တိုးမြှင့်ကာကွယ်သော ကုလသမ္မဂအထူးကိုယ်စားလှယ်
UNESCO အဖွဲ့ကြီးမှလည်း လွတ်လပ်စွာ ထုတ်ဖော် ပြောဆိုခြင်းဆိုင်ရာ ကြေညာချက်များ နှင့် အခြားသော နိုင်ငံတကာစံ တရားဝင် အထောက်ထားမှတ်တမ်းများကို ထောက်ပံ့ပေးလေသည်။
အာရှ - အာဆီယံလူ့အခွင့်အရေးကြေညာချက်
လူ့အခွင့်အရေးဆိုင်ရာ အာဆီယံနိုင်ငံများအစိုးရ ကော်မရှင်
+ ဥရောပ ၊ အာဖရိက ၊ အမေရိကန်
Find out more about the key international standards »
Find out more about freedom of expression >